आर्थिक अभियान:प्रदेश ०१
म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु नष्ट
धरान (अस) । चाडबाड नजीकिँदै गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । अनुगमन टोलीले केही दिनयता अनुगमन गरी मिति नाघेका खाद्य सामग्री नष्ट गर्न थालेको छ । नगर प्रहरीको टोलीसहित उपमहानगरको बजार अनुगमन समितिले अधिकांश होटल, खाजाघर तथा किराना पसलमा अनुगमन गरेको हो । खाद्य सामग्रीमा...
पशुपक्षीजन्य पदार्थ प्रवर्द्धनमा बजेट न्यून
भदौ १९, फिदिम । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि पशुपक्षीजन्य पदार्थ प्रवर्द्धनमा बजेट अपर्याप्त रहेको पाइएको छ । पाँचथर र ताप्लेजुङलाई माछा, मासु, अण्डा र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी नीति रहे पनि पशुपक्षीको व्यावसायिक पालन प्रवर्द्धनका लागि बजेट अभाव भएको छ । &nb...
प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन पहल
विराटनगर (अस) । मोरङको दुहबी–कटहरी प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहल थालेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले बुधवार आफ्नै कार्यकक्षमा प्रसारण लाइनको अवरोधको समस्या समाधानबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेका हुन् । मोरङ क्षेत्र नं. ४ बाट नेकपाका लागि संघीय सांस...
इस्टर्नद्वारा १ लाख क्वीन्टल चिनी उत्पादन
विराटनगर । इस्टर्न सुगर मिल अमाहीबेलहा सुनसरीले यसवर्ष १ लाख छ हजार ७६ क्वीन्टल चिनी उत्पादन गरेको बताएको छ । मिलले सो परिमाणको चिनी उत्पादन गर्न सुनसरी, मोरङ र झापाका करीब तीन हजार उखु किसानबाट ११ लाख ७८ हजार ६२५ क्वीन्टल उखु खरीद गरेको थियो । उखु किसानलाई मिलले प्रति क्वीन्टल रू. ४४१.२८ का दरले रू...
आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख प्रदेश १
देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर १ आफूसँग भएका धार्मिक, औद्योगिक तथा पर्यटकीय व्यापारको आधारमा समृद्धितर्फ अभिमुख छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुसहित तीन हिमाली जिल्ला, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलामस...
मोरङमा पनि शुरू भयो स्वास्थ्य बीमा
विराटनगर (अस) । संघीय सरकारले देशभर लागू गर्ने घोषणा गरेको स्वास्थ्य बीमा दर्ता कार्यक्रम गत आइतवारदेखि मोरङमा पनि शुरू भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हु...
लाहा प्रशोधन कारखाना सञ्चालन
भद्रपुर । झापाको गौरादहमा सुनका गहना बनाउन प्रयोग हुने, फर्निचरको प्राकृतिक रङ उजिल्याउने र शिलबन्दी कार्यमा प्रयोग हुने लाहा (चप्रा) प्रशोधन कारखाना सञ्चालन गरिएको छ । भारतको पश्चिम बंगालमा सात वर्ष लाहा कारखानामा काम गरेका गौरादह नगरपालिका–२ का ५४ वर्षीय डम्बर विकले स्वदेशमै लाहा प्रशोधन ग...
पुरानो बिलबाट विराटनगरमा तरकारी आयात
विराटनगर (अस) । दुई साताभन्दा बढी पुरानो बिल र विषादी परीक्षणको प्रमाणपत्रको आधारमा आयात गर्न लागिएको तरकारी मोरङ प्रहरीले विराटनगरबाट बरामद गरेको छ । भारतीय बजार जोगबनीबाट विराटनगरतर्फ ल्याइँदै गरेको ६ सय केजी तरकारी प्रहरीले मंगलवार बिहान बरामद गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी घन...
सोलुखुम्बु । महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ का स्थानीयवासीले विद्यालय क्षेत्रभित्र तयारी खानेकुरा (जंकफूड) मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । स्थानीय एक विद्यालयका शिक्षक तारा कुलुङले सोमवार आयोजित तीज विशेष कार्यक्रममा भेला भएका सरोकारवालाले जंकफूड प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको बताइन् । &lsq...
विराटनगर भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोमा पूरानो बिलबाट तरकारी आयात
भदौ १७,विराटनगर । दुई साता बढी पूरानो बिल र बिषादी परीक्षणको प्रमाणपत्रको आधारमा आयात गर्न लागिएको तरकारी मोरङ प्रहरीले विराटनगरबाट बरामद गरेको छ । भारतीय बजार जोगबनीबाट विराटनगरतर्फ ल्याउँदै गरेको ६०० केजी तरकारी प्रहरीले मंगलवार बिहान बरामद गरेको हो । दुई साता बढी पूरानो बिषादि प...
दाना सबस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा
जीईको इन्जिन चीन निर्यातमा रोक लगाउँदै अमेरिका
विराट एक्स्पो २०७६ : ३ दिनमा ६० हजारद्वारा अवलोकन, ७ करोडको कारोबार
दक्षिण कोरियाली राजदूत र पोउवा संघका प्रतिनिधिबीच भेटघाट
गुहेश्वरी मर्चेन्टको एक्सटेन्सन हटियामा